‘महिलाहरु सिप सिकेर आत्म निर्भर वन्न आवस्यक छ’ : महिला उद्यमी थापा – Ganatantra Online
‘महिलाहरु सिप सिकेर आत्म निर्भर वन्न आवस्यक छ’ : महिला उद्यमी थापा
शनिबार, बैशाख २८, २०७६ १५२००९
विगत २० वर्ष देखि घोराहीमा कटाइ सिलाइ तथा व्युट्रिपार्लर व्यवसाय सञ्चालन गदै आउनु भएको महिला उद्यमी विष्णु थापा ले २०६७ सालमा राष्ट्रिय पुरस्कार समेत प्राप्त गर्नु भएको थियो ।
घोराही उप महानगरपालिका वडा नं १५ तुल्सीपुर चोक देखि पश्चिम मा रहेको ऊ कटाइ सिंलाइ प्रशिक्षण केन्द्र एवम सप्लाएस तथा ऊ आकृति व्युट्रिपार्लर सञ्चालन गदै आउनु भएका महिला उद्यमी थापा संग गरेको कुराकानी सारसंक्षेप
कसरी व्यवसाय सुरु गर्नु भयो ?
सानै दैखि व्यवसाय प्रति रुचि रहेको थियो । त्यसैले अन्य पेशामा जानु भन्दा व्यसायमा लागेको हु । अन्य पेशामा अरुको अधिनमा वस्नु पर्ने वाध्यता रहने तर व्यवसायमा आफु स्वतन्त्र भएर काम गर्ने सकिने भएकाले पनि यस प्रति आकर्षण भएको हो । महिला पनि आत्म निर्भर वन्नु पर्दछ भने भावनाको विकास सानै देखि ममा रहेको थियो । घरमा घरव्यहार चलाउनका लागि एउटाको मात्र भर नपरी सवैले आफनो क्षेत्रमा आत्म निर्भर वन्नु पर्दछ भन्ने मेरो मान्याता रहदै आएको छ । त्यसैले मैले २०५५ साल कटाइ सिलाई व्यसाय सुरु गरेका हुँ ।
जिल्लामा कटाइ सिलाइ तथा व्युट्रिपार्लरको यवसायको अवस्था कस्तो रहेकोे छ ?
कटाइ सिलाइ तथा व्युट्रिपार्लरको व्यवसाय सन्तोष जनक अवथा नै रहेको छ । पछिल्लो समयमा यस व्यवसायमा महिलाहरुको आकर्षण वढदै गएको छ । जसले गर्दा महिला आत्म निर्भर वन्न समेत सहयोग पुग्को छ ।
तपाइले कटाइ सिलाइ तथा व्युट्रिपार्लर व्यवस्था गर्दा के कस्ता समस्या भोग्नु पयो ?
सुरुका दिनमा व्यवसाय गर्दा धेरै समस्या भोगियो । त्यसो समयमा कटाई सिलाइ व्यवसाय गर्दा अन्य जातिले गर्नु हुदैन भने मान्यता रहेको थियो । महिलाहरु वाहिर किस्कन समेत समस्या समेत थियो । वाहिर निस्दा समाजमा कुरा काटनेको समस्या थियो । कटाइ सिलाइ सिप सिकाउनका लागि घर घरमा पुगेर वोलाउनु पर्ने वाध्यता रहेको थियो । सुरुका दिनमा व्युट्रिपार्लर लाई हेर्ने कोण रहेको थियो । व्युट्रिपार्लरमा छिर्न समेत मानिसले अप्ठेयारो मान्न गरेका थिए । सिक्न समेत आउदैनथे । यसले गर्दा व्यवसाय गर्न समेत समस्या रहेको थियो ।
के कटाइ सिलाइ तथा व्युट्रिपार्लर ब्यबसाय गरेर जिवन चलाउने वातावरण निर्माण भएको छ ।
अहिले कटाइ सिलाइ तथा व्युट्रि पार्लर गरेर जिवन जिउने वातावरण निर्माण भएको छ । समय संगै यस पेशा लाई हेर्ने दृष्ट्रि कोण समेत परिवर्तन भएको छ । अहिले करिव २५ प्रतिशत महिला हरु कटाइ सिलाइ तथा व्युट्रिपार्लस व्यवसायमा सङग्लता हुनु भएको छ । जसले महिलाहरु लाई आत्म निर्भर वनाएको छ । थोरै लगानी वाट पनि व्यवसाय सुरु गर्ने सकिने भएकाले पनि यस तर्फ महिलाहरुको आकर्षण वढेको हो ।
व्यवसायंहरु लाइ राज्यले कतिको सहयोग गरेको पाउनु भएको छ ?
राज्यले व्यवसायिहरु लाई प्राप्त मात्रामा सहयोग गरेको छैन । व्यवसाय गर्दा दर्ता प्रक्रिया समेत सहज छैन । व्यसाय दर्ता गर्दा विभिन्न प्रकारको झण्जट व्होरनु परेको छ । वयवसाय गर्नेका लागि राज्यले ऋण समेत सहज रुपमा दिने गरेको छैन । उद्यमीहरुले उत्पादन गरेका सामाग्री वजारीकरणमा समेत राज्यले ध्यान दिन सकेको छैन । जसले विदेशमा पठाउन समस्या भोग्दै आएका छन् ।
व्यसाय गर्ने चाहने महिलाहरु लाई राज्यले के कस्तो सहयोग गर्न आवस्यक छ ?व्यसाय गर्ने चाहने महिलाहरु लाई राज्यले तालिम दिन आवस्यक रहेको छ । त्यस पछि व्यवसाय गर्नेका लागि सहुलीयत दरमा सहज रुपमा ऋणको व्यवस्था गरीदिन आवस्यक रहेको छ । जसले महिलाहरु पनि व्यवसायमा सङग्न भएर आत्म निर्भर वन्ने छन् । भने राज्यको आय स्रोत समेत वृद्धि हुने छ । उत्पादन भएका सामाग्रीहरुको वजारी करण गरीदिनु पर्ने आवस्यक रहेको छ । सामुहिक रुपमा उदोग सञ्चालन गर्ने चाहने महिला लाई प्रोत्साहन गर्ने निती ल्याउन आवश्यक छ । त्यसै गरेर राज्यले पुर्वाधार समेत निर्माण गरीदिनु पर्दछ । उद्योग स्थापनाका लागि आवस्यक पर्ने सडक, विद्युत, सञ्चार, पानीको समेत राज्यले व्यवस्था गरीदिनु पर्दछ ।
तपाइ प्रशिक्षक रुपमा समेत कार्य गदै आउनु भएको छ । हाल सम्म कति महिला उद्यमी वनाइ सक्नु भयो नि ?
म संग प्रशिक्षण लिएका ५० जना महिलाहरु अहिले उद्यमी वन्न सफल हुन भएको छ । तालिम दिएर प्रशिक्षक उत्पादन तथा महिलाहरु लाई रोजगार समेत प्रदान गने गरेको छु । हाल सम्म करिव २ हजार वढी लाई तालिम दिइ सकेको छु । तालिम दिनका लागि दाङ सहित राप्तीका सवै जिल्लाहरुमा पुग्ने गरेको छु । मैले २५ देखि ३० वटा विषयका तालिम दिदै आएको छु । जसमा सवै भन्दा वढी कटाइ सिलाइ, व्युट्रिपार्लर, वुटीक, खाद्य प्रशोसन उद्यम शिलता तालिम दिदै आएको छु ।
अन्तयमा केही भन्नु छ ?
अहिले महिलाहरु लाई लाई उद्यमी वनाउनका लागि निरन्तर तालिम दिदै आएको छु । जसका लागि नारी सिप समाज समेत गठन गरेर अगाडि वढेको छु । त्यसैगरेर ऊ सप्लायर्सको माध्यम वाट राप्ती अञ्चल भरी स्वास्थ्य सम्वन्धी सुत्केरी आमा नानिको (कपडा न्यानो झोला उत्पादन ) गदै आएको छ । यसले महिलाहरु लाइ रोजगारको अवसर प्रदान समेत गरेको छ । हरेक महिलाहरु स साना उद्यम व्यवसाग गरेर भए पनि आफुलाई उद्यमी वनाउन आवश्यक छ । जव सम्म महिलाहरु आत्म निर्भर हुदैनन् तव सम्म महिलाहरु लाई आर्थिक रुपमा समस्यामा पने गर्दछ । त्यसले हरेक सिप सिकेर आत्म निर्भर वन्न जरुरी रहेको छ ।